शिशुको जन्मिन पाउने अधिकार म किन खोसूँ ?
बाँच्न पाउने अधिकारको परवाह नगरी गर्भपतन गराउनु नाजायज हो
१७०६ पटक पढिएको
केही समयअघि इटहरीमा परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको थियो । कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनसँगै राष्ट्रगान, मौनधारण, स्वागत मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य आदि चल्यो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रदेश नम्बर १ की नर्सिडस प्रमुख केशु काफ्लेले परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका प्रकार, साधन प्रयोगको फÞाइदा र बेफाइदा, परिवार नियोजनको महत्व आदिसम्बन्धी जानकारी दिइन् । विषयगत सामग्री लिएर अन्य वक्ताहरू पनि आए र आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेर गए ।
गर्भपतनसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सर्भेक्षण गरी निकालेका नयाँ डाटाहरू लिएर प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण शाह आए । विश्वभर प्रत्येक घण्टा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक महिना र प्रत्येक वर्ष हुने सुरक्षित तथा असुरक्षित गर्भपतन र गर्भपतनबाट मृत्यु हुने महिलाहरूको अकल्पनीय डाटाहरूलगायत यससम्बन्धी अन्य डाटाहरू धाराप्रवाह उनले प्रोजेक्टरमार्फत् प्रस्तुत गरे ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले फेब्रुअरी २०१८ मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार संसारभर प्रत्येक वर्ष ५ करोड ६० लाख गर्भपतन गरिन्छ । यो कुल जन्मदरको २५ प्रतिशत हुन आउँछ र यसले ८० लाख महिलाको ज्यान जोखिममा पार्दछ । त्यसमा असुरक्षित गर्भपतन २ करोड ५० लाख पर्दछ । नेपालमा पनि प्रतिवर्ष १५ हजार ५ सय १२ जना महिलाले गर्भपतन गर्छन् । त्यसमा कुल मातृ मृत्युको ७ प्रतिशत गर्भपतनबाट हुने गर्दछ भन्ने डाटा उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
गर्भपतन र यसले निम्त्याएको मातृ मृत्युको विषयलाई त्यहाँ फÞोकस गरिएको थियो । यसको कारक तत्व वा यसबाट नष्ट भएर गएको जीवनको त्यहाँ उल्लेख थिएन । अनावश्यक भावुक मेरो मन भने गर्भपतनबाट नष्ट हुने भु्रण अवस्थाका शिशुहरूको सङ्ख्यामा गएर टक्क अडियो । त्यसपछिको उनकोे प्रस्तुतितर्फ मेरो ध्यान जान सकेन । सोच्दासोच्दै टाउको दुख्न थाल्यो । बाहिर निस्केर एउटा कोडोमोल खाएँ । त्यसको केही समयमा आराम भएको महसुस भएपछि पुनः हलभित्र प्रवेश गरेँ ।
चिकित्सा विज्ञान भन्छ, भु्रण पनि जीवित मानव हो
चिकित्सा विज्ञानले भनेको छ, ‘गर्भमा रहेको शिशु एउटा जीवित मानव हो । गर्भधारण भएको २१ दिनपछि सो शिशुको मुटुको ढुकढुकी चल्न थाल्छ जहाँ उसको आफ्नै रगत सञ्चारित हुन्छ । ४ हप्तादेखि हातखुट्टा र आँखाको साथै भित्री अङ्गहरूको पनि विकास हुन थाल्छ भने ७ हप्तादेखि सो भु्रण अवस्थाको शिशु आफ्नो सानो संसारभित्र बिस्तारै चल्न र पौडन शुरू गर्छ । आठौं हप्ताबाट अन्य अङ्गहरू क्रमशः विकास हुन्छन् । आन्द्रा र मृगौलाले त त्यतिबेलादेखि नै काम गर्न शुरू गरिसकेका हुन्छन् । एवम् रीतले शिशुको विकासको प्रक्रिया चलिरहँदा १२ हप्तादेखि भने उक्त शिशुले बाहिरको आवाज सुन्ने र भोक तथा दुखाइ महसुस गर्न सक्ने हुन्छ र आफ्ना आँैलाहरू चुस्न थाल्छ ।
नेपाल सरकारले पनि मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनपछि सन् २००२ देखि १२ हप्तासम्म वा विशेष परिस्थितिमा १८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । यसले महिला अधिकार सुरक्षितको नाममा महिला स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल र अध्ययनको आवश्यकता छ ।
महिलाहरू दबाबमूलक गर्भपतनको सिकार बन्दै
पितृसत्तात्मक भनिएको हाम्रो समाजमा मात्र नभएर अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि छोराको चाहनाले र पुरुषले अस्थायी साधन प्रयोग गर्न नमान्दा महिलाहरू दबाबमूलक गर्भपतनको सिकार हुने गरेको पाइन्छ । गर्भपतनको नकारात्मक असरबारे जान्दाजान्दै पनि शिक्षित तथा सभ्य पुरुषदेखि लिएर सामान्य पुरुषहरू पनि महिला स्वास्थ्यमा लापर्बाह हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरूले आवश्यक पर्दा अन्य सेवा वा अधिकार लिन नसकेको अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार कत्तिको महिलाको हितमा छ भनी छलफल गर्न आवश्यक छ ।
गर्भपतन मौलिक अधिकार कि मानव हत्या ? भनेर संसारभर बहस चलिरहेको छ । ‘आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो अधिकार’ भन्ने नाराका साथ आन्दोलन चलाइरहेका महिलावादीहरू यसलाई कानुनले दिएको वैधता मानी आफ्नो अधिकार प्राप्ति भएको ठान्छन् । छोरा प्राप्तिको चाहनाले नर्सिङ होम र प्राइभेट क्लिनिकको डस्बिनमा लाखौं छोरीको भु्रण फ्याँकिएको छ । बारम्बारको अनिच्छित गर्भ अनि लोग्ने र परिवारको दबाबमा गर्भपतन गर्नुपर्दा महिलाहरू कमजोर बनिरहेका छन् ।
प्रेमको नाममा यौन खोज्ने पुरुषहरूबाट गर्भवती भएका कुमारी केटीहरूको प्रजनन क्षमता गुमी बाँझो बन्दै गएको पाठेघरले कस्तो महिला अधिकार प्राप्त गर्यो भनी सोच्नु आवश्यक छ । साथै मानव अधिकारको सवालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनु कति जायजÞ हो भनी भु्रणको रक्षाको वकालत गर्ने कुनै इजलास छैन न त न्यायको कुनै गुन्जायस नै छ । गाँस, बास र कपासको साथै सहबासको आवश्यकता आदिम युगदेखि नै महसुस भएर निरन्तर सृष्टि चलिरहेको छ ।
सहवासमा स्त्री पुरुष दुवैको उत्तिकै सहभागिता भए पनि गर्भ बोक्ने सौभाग्य स्त्रीले मात्र पाउँछन् । तर यही सौभाग्य कतिपय अवस्थामा अभिशाप बनेको छ । विभिन्न धर्म र सम्प्रदायमा गर्भपतनलाई मानव हत्याको रूपमा लिई व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
नारी र गर्भपतनसम्बन्धी विभिन्न तर्कनाले मन चिमोटिरहेको थियो । बीचबीचमा एक÷दुई सहभागीका जिज्ञासाबाहेक हल पुरै शान्त थियो । डाक्टर शाह पोडियम छोडी सहभागीछेउ आएर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैथिए । तर मेरो कानमा भने अचम्मको कोलाहल गुञ्जिरहेको थियो । मलाई यस्तो लाग्यो त्यो जन्म अधिकार र जीवन रक्षाका लागि याचनाका पुकारहरू हुन् । त्यो लाखौं अश्रव्य ध्वनिले गर्दा त्यसपछि डा. शाहले केके भने भन्ने पत्तै पाइनँ । आफूलाई शान्त पार्ने प्रयास गर्दै सो कार्यक्रमप्रति एकाग्र हुन खोजेँ । अहँ पटक्कै सकिनँ ।
मेरो मन अनावश्यक रूपले एकोहोरो ती निर्दोष शिशुहरूको ध्वस्त जीवनप्रतिको चिन्तामा रुमल्लिइरह्यो । जो गर्भमै मारिएका छन् । जसको कुनै अस्तित्व बाँकी छैन । जन्मिन पाउने अधिकार कहिल्यै नफर्किने गरी गुमेको छ । जसको विरुद्ध कुनै विद्रोह छैन । जन्मिन पाउने हकÞ प्राप्तिको कुनै गुञ्जायस छैन ।
छेउमा भएका सहभागी सबै ध्यानमग्न भएर सुनिरहेका थिए । अचानक मेरो मनले रकेटको वेग लिएर १० वर्ष अघिको विगतमा हाम फाल्यो । त्यहाँ एउटा अपवादको अंश थियो त्यो हो ‘म्हेन्दो’ जो गर्भपतन हुनबाट बालबाल बचेर जन्म लिन पाएकी एउटी बालिका थिई ।
उक्लँदै गरेको शरद ऋतुको एउटा बिहानी स्मृतिमा फनफनी घुम्न थाल्यो । त्यस बखत म सामुदायिक अस्पतालको फार्मेसीमा काम गर्दै थिएँ । पश्चिमबाट तुफान गतिमा एउटा रिक्सा आयो । रिक्सामा दुई जना केटी सवार थिए । हेर्दा दुवै आर्य मूलको जस्तो लाग्यो । एक जनाले कुर्ता सलवार लगाएकी थिई भने अर्को कलेज ड्रेस सर्ट पेन्टमा थिई र बर्की ओढेकी थिई ।
शायद पहिले पनि त्यहाँ उनीहरू आएका थिए । अभ्यस्त पाइलासरह सरासर भित्र इमर्जेन्सी रूममा प्रवेश गरे दुवै । सर्ट पेन्ट लगाउनेले नराम्रोसित अनुहार बिगारिरहेकी थिई शायद दुखाइले होला । चेक सकिएपछि इमर्जेन्सी रुमबाट माथि लेभर रूममा लगियो । करिब ४५ मिनेटपछि उसले एउटा स्वस्थ छोरीलाई पो जन्म दिई । त्यसबेला मोबाइल त्यति प्रयोगमा थिएन । ल्यान्डलाइनबाट केटीकी दिदीले घरमा खबर गरी, ‘आमा ! कान्छीलाई सामुदायिक अस्पतालमा लिएर आ’की छु ! तपाईँ चाँडै आउनू ।’
करिब १ घण्टापछि उसकी आमा र अर्की दिदी पनि अत्तालिँदै अस्पताल आइपुगे । कौशिला सिस्टरले बोलाउनुभएकाले म पनि माथि पोस्टनेटल रुममा गएँ । म त छक्क परेँ । १ घण्टा अगाडि मात्र कलेज ड्रेसमा आएकी गर्भवतीजस्तो पटक्कै नलाग्ने (उसको पेट देखिएको थिएन) केटी एउटा नवजात शिशुलाई खोकिलामा लिएर सुतिरहेकी थिई । ठूलाठूला काला उसका आँखा खुल्लै थिए र निर्निमेष दृष्टिले उक्त शिशुलाई हेरिरहेकी थिई । हात भने त्यो नवजात शिशुका मसिना औँला मुसार्नमा व्यस्त थिए ।
उसका आँखामा प्रश्रवको क्लेश रत्तिभर थिएन । अनुहारमा एक प्रकारको सन्तुष्टिको चमक थियो शरीर भने थकाइले क्लान्त देखिन्थ्यो । उसकी आमालाई छोरी सुत्केरी भएको कुरा फोनमा भनिएको थिएन । भनेको भए शायद त्यहीँ फेन्ट हुँदी हो । त्यसैले केही नबोकी अत्तालिँदै रित्तै अस्पताल आएका थिए । सुत्केरीका २ जना दिदीहरूलाई सुत्केरी र बच्चाको लागि केही कपडाहरू किन्न बजार पठाइएको रहेछ । सुत्केरी सर्ट पेन्टमै लपेटिएकी थिई । फेर्ने कपडा केही थिएन । भएको एउटा बर्कोमा पनि बच्चा पोको पारिएको थियो । उसलाई अस्पतालकै कम्बल ओढाइदियौं ।
आमाको अनुहारमा चिन्ता र आश्चर्यको गहिरो छाप र भयका रेखाहरू प्रस्ट देखिन्थे । खास कुरा बच्चा जन्माउने केटी अविवाहित रहिछ । ऊ गर्भवती छे भन्ने कुरा पुरै परिवारलाई त के दिदीलाई पनि त्यतिबेला मात्र थाहा भएको रहेछ जुन बेला उसलाई प्रश्रव पीडाले च्याप्यो र अस्पताल आई ।
केटीकी आमा छोरी भएनिर गएर भनिन्, ‘कान्छी, तैँले यो के गरेको ? अब हामीले समाजमा कसरी मुख देखाउनु ? यो पापलाई कहाँ लगेर राख्नु ? पहिले किन नभनेकी ? पहिले भनेकी भए खोलेर फ्याँक्नु हुन्थ्यो...।’ यस्तै केके बिलौना गर्दै रून लागिन् । हामीले आमालाई वर बोलाएर सम्झायौं । डेलिभरी भएको २४ घण्टासम्म कुनै प्रेसर पर्नुहुन्न । सुत्केरी सकमा जाने, ओभर ब्लिडिङ हुने सम्भावना हुन्छ भनेर भन्यौँ ।
हामीले आमा छोरी दुवैलाई कुनै प्रेसरबिना बच्चा के गर्ने त भनेर सोध्यौ ? छोरीले कुनै उत्तर दिइन । आमाले भने बच्चा घर नलाने निर्णय सुनाइन् । फेरि छोरी भएनेर गएर अरू पनि केही कुरा सोध्यौँ । उसले बच्चा आफैँ पाल्ने भनी । आमा भयमिश्रित अनुहार पारेर छक्क परिन् । हामीले सोध्यौं बाबु को हो त ? तिमीलाई थाहा होला नि । सत्य भन हामी सकेको सहयोग गर्छौं । केटीले उसको धोकेबाज प्रेमी त्यो बच्चाको बाबु मलेशिया भासिइसकेको कुरा बताई । ठेगाना सोधेर आफ्नो प्रेमीप्रति अविश्वासको सङ्केत दिने धृष्टता गरिनछे पहिले । त्यसैले कुनै ठेगाना सम्पर्क नम्बर रहेनछ । मलेशिया गएको कुरा पनि कलेजको साथीबाट थाहा भएको रहेछ ।
कौशिला सिस्टरले भन्नुभयो, ‘आफू गर्भवती भएको कुरा तिमीलाई पहिले थाहा थियो होला उतिबेलै घरमा किन नभनेको त ? अरूलाई नभने पनि कम्तीमा आमालाई त भन्नु । शुरूमै एबोर्सन गरेको भए अहिले यो अवस्था त आउने थिएन ।’
त्यति सुनिसकेपछि उसले जवाफ दिई, ‘उसको जन्मिन पाउने अधिकार म किन खोसूँ ?’ त्यसपछि उसले आफ्नो सत्य कहानीको बेली बिस्तार लगाई र ९ महिनासम्म बाँधेर राखेको अविलय गर्भ र रहस्यको पन्तुरा फुकाई ।
घर नजिक राम्रो कलेज नभएकाले इटहरीमा डेरा बसी १२ कक्षा पढ्दै गर्दा सँगै पढ्ने राई केटासँग उस्को प्रेम बसेछ । थोरै समयमै गाढा बन्दै गयो पिरती । विवाहको प्रस्ताव पनि उसले नराखेकी होइन । तर केटाले मानेनछ ।
‘ब्याचलर शुरू गरेपछि विवाह गरौं । अहिले नै बिहे गर्दा सबैले कलिलैमा बिहे गरिस् भनेर जिस्क्याउँछन् । अहिले हाम्रो कुनै आयस्रोत पनि छैन । बिहेपछि बच्चा हुन्छ खर्च पनि बढ्छ । ब्याचलर ज्वाइन गरेपछि म पनि काम खोज्छु’ भनी उसले जवाफ दिँदो रहेछ ।
केटाका सायरी र कविताहरू भरिएका चिठीहरू पढेर केटी मुग्ध हुन्थी । बिस्तारै प्रेमको सागरमा चुर्लुम्मै डुबी । केटाले पनि उसलाई त्यस्तै प्रेम गर्छ भन्ने सम्झिई । वास्तवमा केटीहरू प्रेमको मामलामा बढी नै भावुक हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित भएको देखिन्छ । भनिन्छ केटाहरू यौन सम्बन्ध राख्न माया गर्छन्, केटीहरू माया पाइराख्न यौन सम्बन्ध राख्छन् । त्यहाँ त्यस्तै भएछ । उसले प्रेममा समर्पण गरी आफूलाई । परिणाममा गर्भ रहन गयो । यो कुरा केटालाई खुशी हुँदै सुनाई । केटाले पनि त्यसबेला खुशी भएको नाटक ग¥यो ।
जब गर्भ रहेको ३ महिना लाग्यो केटाले विभिन्न बहाना बनाउँदै सो गर्भपतन गराउन जोड दिन थाल्यो । उनीहरूले इटहरीका केही क्लिनिक पनि चाहारे । गर्भपतन गराउने औषधि पनि किनेर ल्याए । तर उसको अन्तरआत्माले औषधी खान दिएन र सुटुक्क फ्याँकिदिई । बच्चा पेटमै रहेको भनी उसले केटालाई भनी । केटाले गर्भपतन गराउनै चाहेको थियो । औषधीले काम गरेन भनी केटीलाई उसले विराटनगरसम्म लग्यो । बच्चा चल्न थालिसकेको थियो । डाक्टरले गर्भपतन गराउन जोखिम हुने बताई मानेनन् । अब त उसले गर्भपतन गराउन झन् मानिन र त्यो निर्दोष शिशुको प्राण जोगाउन खोज्दा बदलामा धोका पाई ।
उसले यो कुरा घरमा पनि भनिन । उसले सम्झिई आमाले पनि त्यो गर्भ तुहाउन अवश्य जोड गर्नेछिन् । आखिर आमा पनि त्यही नैतिक आडम्बरले ग्रसित पुरुषश्रेष्ठ समाजको दास न हो । त्यो निरीह प्राणीले छोरीको लागि विद्रोह गर्न के सक्थी र ? त्यसपछि ऊ घर पनि गइन । पढ्नु छ, परीक्षा भइरहन्छ भनी बहाना बनाउँदै डेरामै बस्थी । दिदीहरूले चामल, तरकारी ल्याइदिन्थे । त्यही पकाएर खान्थी । तरकारी काट्दा हात काटेको निहुँ पारी नजिकैको क्लिनिकमा गएर उसले २ वटा टिटानसको सुई पनि लगाई । उसलाई बच्चा जन्माउने दिनसम्म पनि यस्तो लाग्थ्यो कि यो कुरा घरमा भने गर्भ तुहाउन बाध्य पारिन्छ ।
त्यसैले छातीमा गम र पेटमा गर्भ गुम्साएरै राखी ९ महिनासम्म । प्रेमी धोकेबाज भए पनि बच्चाको के दोष हुन्छ र भन्ने सम्झेर आफूलाई शिशु हत्याजस्तो जघन्य अपराधबाट मुक्त गराई र भविष्यमा आइपर्ने चुनौती र चिन्ता भगवान भरोसा छोडेर आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चालाई सकुशल जन्म दिई बिना कुनै कम्प्लिकेसन ।
त्यही निडर तर अभागी आमाको कोखबाट जन्मिएकी निर्दोष बच्ची हो ‘म्हेन्दो ।’ जसलाई नारीप्रति सङ्कुचित मनोविज्ञानग्रस्त नैतिक आडम्बरको खोल ओढ्ने सामाजिक सोचको उपजले ऊबाट सदाको निम्ति अलग्याएको थियो । उसले एउटा मानवको जन्मिन पाउने अधिकार हनन गरिन ।
ऊ जे गरेर भए पनि मेरो बच्चा म पाल्छु भन्दैथिई । यो सम्भव छैन भन्दै आमा र दिदीहरूले सम्झाउँदै थिए । समाजले गर्ने प्रश्न, हेर्ने दृष्टिकोण, भविष्यमा आउने समस्याका बारे सुझाएपछि उसले जिद्दी गर्न छाडी र मानवता र ममताको अनन्त सङ्गम आफ्नो मातृवात्सल्यबाट अलग्याउन बाध्य भई मुटुको एक टुक्रालाई ।
मैले चिनेको मेरै जिल्लावासी शेर्पा दम्पत्तिले त्यो बच्चीलाई लिने भए । २ वटा छोरा मात्र भएका शेर्पा दम्पत्तिले पहिल्यै कुनै बेला प्रसङ्गवश छोरीको रहर भएको कुरा हाम्रो कार्यालय सहयोगी पार्वती दिदीलाई भनेका रहेछन् । केटीकी आमाले समाजको अनेक प्रश्न र अपहेलना सामना गर्ने हिम्मत गर्न नसक्ने बिलौना गरेपछि त्यो बच्ची शेर्पा दम्पत्तिलाई जिम्मा लगाउन बाध्य भई ऊ । उनै शेर्पा बाबुले दिएको नाम हो ‘म्हेन्दो’ । ऊ अहिले १० वर्षकी भई । ४ कक्षामा पढ्छे भन्ने कुरा ‘म्हेन्दो’की आमालाई बजारमा भेटिरहँदा थाहा भएको हो । किनकिन उसको विषयमा चासो लागिरहन्छ मलाई ।
यही भदौ अन्तिमको एक साँझ शेर्पा दाइको घर छेउतिरको एक जना साथीलाई भेट्ने बहानामा ‘म्हेन्दो’लाई पनि भेट्ने समय मिलाएँ । क्षेत्रिनी र राई क्रस (मिश्रण ) भएर होला चाइनिज गुडियाजस्तै देखिने रहिछे ऊ । चम्किला र काला औधी चञ्चल उसका आँखा देखेर उसकी आमाको अनुहार सम्झेँ । जुन आज भोलि कता होली के गर्दै होली केही पत्तो छैन । सायद टाढा कतै पुगी होली यो शहरभन्दा ।
म्हेन्दोकी आमाले भनेअनुसार ऊ पढ्नमा निकै तेज छे । अहिलेसम्म कक्षामा दोस्रो हुनु परेको छैन उसलाई । होमवर्क गर भन्नु पर्दैन । भान्साको काममा पनि आमालाई सघाउन अघि सर्छे । फुर्सदको समयमा पसलमा बाबालाई सघाउँदा निकै फुर्तिली हुन्छे । कापी, कलम, पेन्सिल खासै किन्नु पर्दैन उसलाई । ती सामग्रीहरू पुरस्कारस्वरूप प्राप्त गरिरहन्छे । म्हेन्दोलाई देखेपछि मनले धेरै हलौं महसुस गर्यो र म्हेन्दोकी आमाप्रति श्रद्धाले मन भरिलो भयो । आफ्नो अस्मिता र इज्जत दाउमा लगाई फूलजस्ती छोरी म्हेन्दोलाई यो संसार हेर्ने अवसर त प्रदान गरी ।
गर्भपतनबाट नष्ट भएका शिशुको बारेमा चासो लिनु आवश्यक
कहिलेकाहीँ गर्भपतनबाट नष्ट गरिएका शिशुहरूप्रति अगाध करूणा जाग्छ मलाई । जो नर्सिङ होमको हजहरूमा सडिन्छन् । गाईवस्तु गोठको रछ्यान र झाडीहरूमा फ्याँकिन्छन् भने कोही नालीमा बग्ने फोहोर पानीमा मिसिन्छन् । कोही जिउँदै माटोमुनि गाडिन्छन् । गर्भपतन गर्न बाध्य त्यस्ता नारीहरूप्रति चरम सहानुभूति जाग्छ । जो लोग्नेको परिवार नियोजनको अस्थायी साधनप्रतिको विमोह र महिलालाई भोग गर्ने साधन मात्र सम्झिई स्वास्नीले बारम्बार गर्भवती हुनुपर्छ भन्ने सोचको विरुद्धमा उत्रिई ।
त्यस्ता नारी जो स्त्री जातिलाई चुसिसकेपछि रद्दी कागजको खोस्टो मात्र सम्झिई दोजिया बनाई अलपत्र छोडिएकी हुन्छे । त्यस्ती नारी जो परिवारको छोराको चाहानाले छोरी भु्रणलाई खतम गर्न बाध्य हुन्छे । त्यस्ती नारी जो प्रेमको जालमा परी हवस्को शिकार बन्छे । समाजमा कति त्यस्ता पनि महिला होलान् जो यौन आनन्दमा लिप्त भएर बेपर्वाह बारम्बार गर्भ धारण गरी आफ्नो गर्भमा आएको बच्चालाई एउटा मासुको डल्लोशिवाय अरू केही सोच्दैन र बारम्बार गर्भपतन गराउँछन् ।
आजभोलि गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको एउटा प्रविधिजस्तो मात्र ठानी सजिलै गर्भपतन गराउँछन् । र, निर्दोष कोमल शिशुहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्छन् मानिस । डाक्टरहरूको यसमा केही दोष छैन । उनीहरू पुग्दैनन् घरघरमा गर्भपतन गराउने ग्राहक खोज्दै ।
विकराल रूपमा फैलँदै गरेको असुरक्षित गर्भपतन र यसले निम्त्याएको विभिन्न समस्या र मातृ मृत्युदरलाई कम गर्ने विकल्पको रूपमा ल्याएको हुनुपर्छ सुरक्षित गर्भपतनको अवधारणा । २१ औँ शताब्दीमा आइपुगेर पनि महिलाहरूप्रति राखिने फरक व्यवहार र दृष्टिकोणले गर्दा गर्भपतन गर्न विवश हुनु एउटा कारण हो । जस्तो कि कुनै विवाहित (पतिसँग अलग भएकी) वा अविवाहित महिलाले आफ्नो इच्छाबमोजिम बच्चा जन्माउन, त्यसको पालनपोषण गर्न र शिक्षादीक्षा दिलाउने छुट छैन महिलालाई । एउटा पुरुषले बाहिरिया श्रीमतीहरूबाट भएको जतिवटा सन्तान घरमा ल्याएर राखे पनि प्रश्न गरिँदैन तर एउटा महिलाले एउटामात्रै त्यस्तो सन्तान हुर्काए प्रश्नहरूको तीरले बाँच्न मुस्किल बनाइदिन्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिइने विषय संविधानको दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पश्चिमी देशहरूमा बाबुबिनाको सन्तान हुर्काउने अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा पनि यो जरूरी नै छ । यसले केही हदसम्ममा अविवाहित नारीहरू गर्भपतनको दबावमा परी उर्वर मातृकोख बाँझो बनाउन बाध्य नहोऊन् भन्ने हो । साँच्चै भन्ने हो भने पितृसत्तात्मक मनोविज्ञानले स्त्रीलाई भोग्या वस्तु र काम गर्ने साधनभन्दा माथि उक्लेर हेरेको छैन र स्त्रीको स्वतन्त्रतालाई सामाजिक नैतिकताको दोलाई ओढाएर मझेरीमा थन्क्याइदिएका छन् । यो सङ्कुचितताको चिसोपन सदनदेखि सडकसम्म छरपस्ट भएको पाइन्छ । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनु पनि महिला अधिकारको फोस्रो नाराको एउटा उदाहरण हो ।
यसले कतिपय धोकेबाज ढोङ्गी र व्यभिचारी पुरुषलाई चोख्याउने काम गरेको छ । यस्ता पुरुषहरूले हजारौं महिलालाई पापको इनारमा चोबल्ने र मृत्युको खाडलमा धकेल्ने काम गरेको छ । ‘यत्र नारीयस्तु पुज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता’ संस्कृतमा भनिएको छ जहाँ नारीलाई पुजिन्छ त्यहा ईश्वर पनि रमाउँछन् । तर यहाँको पूजा अचम्मको र अर्कै छ ।
यहाँ २ वर्षको बच्चा पनि नभनी अनि ८० वर्षकी वृद्धा पनि नभनी बलात्कार गरेर, बलात्कारपछि हत्या गरेर, शरीरमा एसिड हालिदिएर, बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएर यातना दिइन्छ । दाइजोको निहुँमा चरम यातना दिएर मट्टीतेल खन्याई जिउँदै जलाएर नारीको ‘पूजा’ गरिन्छ भने यस्ता पूजक वा भक्तहरूले निर्वाध रूपले उन्मुक्ति पाएका छन् । यस्ता भक्तहरूले यस्तो घोर भक्तिको अनुभव गर्दा देवताहरू पनि खुशी भएका हुँदा हुन् जसले गर्दा दिनप्रतिदिन लाखौं महिलाहरू आफ्नै कोखका सन्तानको संहार गर्न अग्रसर हुनुपरेको छ ।
परापूर्वकालदेखि नै संसारभर असुरक्षित वा सुरक्षित तवरबाट गर्भपतन गराएको पाइन्छ । नेपालमा असुुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूले पाठेघरमा तिखा सिन्काहरू वा बिषालु वनस्पतिहरू प्रयोग गर्ने, पेटमा कडा मालिस गर्ने र अन्य विभिन्न प्रविधिले ज्यान जोखिममा पार्छन् ।
त्यस्तै, सुरक्षित गर्भपतनअन्तर्गत चुस्ने मेसिन भ्याकुमको प्रयोग गरी १२ हप्तासम्मका शिशु जसले पीडा महसुस गर्न सक्छ त्यसलाई एक किसिमले निर्ममतापूर्वक बाहिर तानेर वा टुक्राटुक्रा पारेर गर्भाशयबाट बाहिर निकालिन्छ । १६ हप्तादेखि माथिको शिशुलाई नुन विषाक्तको स्लाइन इन्जेक्सनको माध्यमबाट नुनको झोल प्रयोग गरी कोमल शिशुलाई गर्भाशय भित्रै जलाएर अधमरो अवस्थामा बाहिर निकालिन्छ ।
यसरी पीडादायी मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् बर्सेनी ५ करोड ६० लाख शिशुहरू । आखिर उनीहरूको दोष के हो ? यसतर्फ कसैको ध्यान किन आकृष्ट हँुदैन ? पशुपंक्षीको अधिकार सुनिश्चित भइसकेको युगमा वार्षिक लाखौं जिउँदा मानव वैधानिक शिकार भइरहेका छन् जसको दोषी केवल महिला मात्र कदापि हुन सक्दैनन् ।
भनिन्छ नारी जातिले गर्भवती नहुनु भनेको स्त्रीको पूर्णता प्राप्त नहुनु हो । जबसम्म कुनै नारीले मातृत्वको बोध गर्न सक्दैन ऊ अपूर्ण नारी हुन्छे । यो सिद्धान्त सबैमा लागु हुनूपर्छ भन्ने छैन ।
नारी पूर्ण हुन आमा हुनुपर्छ । संसार पूर्ण हुन नारी र पुरुष दुवै हुनुपर्छ । चेतनशील प्राणीको स्वघोषित दर्जा पाएको प्राणी हो मानिस । सुखी र खुशी परिवारका नाममा भु्रणको बाँच्न पाउने अधिकारको परवाह नगरी गर्भपतन गराउनु जायज होइन । यसलाई कम गर्ने काममा जोड दिन नसके कुनै समय यस्तो पनि नआउला भन्न सकिन्नँ जहाँ हरेक पुरुष पूर्ण प्रजननसामथ्र्य भएर पनि अपुताली रहन परोस् ।